Yod, Mkpụrụ Akwụkwọ Hibru Kacha Nta Na-eme Ka Obi Sie Anyị Ike
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Mkpụrụ akwụkwọ Hibru anọ nọchiri anya aha Chineke bụ́ Jehova. A na-esi n’aka nri gụrụ mkpụrụ akwụkwọ Hibru gaa aka ekpe
Obi ò kwesịrị isi anyị ike na nkwa niile Chineke kwere ga-emezu? Obi siri Jizọs ike na Chineke ga-emezu ihe niile o kwuru. Ihe ndị ọ kụziiri ndị mmadụ mekwara ka obi sie ha ike na Chineke ga-emezu nkwa ya niile. Ka anyị leba anya n’ihe atụ o nyere mgbe ọ na-akụzi ihe n’elu ugwu. E dere ihe atụ a na Matiu 5:18. Ọ sịrị: “N’ezie, ana m asị unu na ọ dị mfe eluigwe na ụwa ịgabiga karịa otu mkpụrụ akwụkwọ kasị nta ma ọ bụ otu akụkụ mkpụrụ akwụkwọ nke dị n’Iwu ahụ ịgabiga ma ọlị, ihe niile e dere n’ime ya agharakwa imezu.”
Mkpụrụ akwụkwọ Hibru kacha nta bụ י (yod). Ọ bụ ya bụ mkpụrụ akwụkwọ mbụ dị na mkpụrụ akwụkwọ Hibru anọ nọchiri anya aha Chineke bụ́ Jehova. * Ndị odeakwụkwọ na ndị Farisii anaghị eji okwu ọ bụla ma ọ bụ mkpụrụ okwu ọ bụla dị n’Iwu Chineke egwu egwu. Ha wekwaara “akụkụ mkpụrụ akwụkwọ” nke ọ bụla ka ihe dị oké mkpa.
Ihe Jizọs na-ekwu bụ na eluigwe na ụwa nwere ike ịgabiga kama ihe kacha nta n’Iwu ahụ na-agaghị emezu. Ma, Akwụkwọ Nsọ mere ka anyị mata na eluigwe na ụwa ga-adịru mgbe ebighị ebi. (Abụ Ọma 78:69) Ihe a o kwuru mere ka o doo anya na Chineke ga-emezurịrị nkwa niile o kwere ma ihe ndị kacha nta e kwuru n’Iwu ahụ.
Jehova Chineke ọ̀ na-eji ụmụ obere ihe ndị e chere na o nweghị ihe ha bụ kpọrọ ihe? Eenụ. Dị ka ihe atụ, ọ gwara ndị Izrel oge ochie ka ha ghara ịgbaji ọkpụkpụ nwa atụrụ ha ji eme Ememme Ngabiga. (Ọpụpụ 12:46) Ihe a ọ gwara ha nwere ike iyi obere ihe n’enweghị ihe ọ bụ. Ndị Izrel hà ghọtara ihe mere o ji gwa ha agbajila ọkpụkpụ nwa atụrụ e ji eme ememme a? O yiri ka ha aghọtaghị. Ma, Jehova Chineke ma na ihe a ọ gwara ha nwere ihe ọ nọchiri anya ya. Ọ na-egosi na a gaghị agbaji ọkpụkpụ Mesaya ahụ mgbe a ga-akpọgbu ya n’osisi ịta ahụhụ.​—⁠Abụ Ọma 34:20; Jọn 19:​31-33, 36.
Gịnị ka anyị na-amụta n’ihe ahụ Jizọs kwuru? Obi kwesịkwara isi anyị ike na ihe niile Jehova Chineke kwere ná nkwa ga-emezu, ma ndị nke kacha nta. N’eziokwu, mkpụrụ akwụkwọ Hibru nke kacha nta na-eme ka obi sie anyị ike.
^ para. 3 Mkpụrụ akwụkwọ Grik nke kacha nta bụ iota. Ọ ga-abụkwa na ya na nke Hibru bụ́ י (yod) yiri. Ebe ọ bụ na e ji asụsụ Hibru dee Iwu Mozis, jirikwa ya kụziere ya ndị mmadụ, ọ ga-abụ mkpụrụ akwụkwọ Hibru kacha nta ka Jizọs na-ekwu gbasara ya.